190109 16358 viewsBinduli, Mineral Resources Ltd empty iron ore train 4030 with MRL's MHPY type iron ore waggon MHPY 00149 built by CSR Yangtze Co China serial 2014/382-149 in 2014 as a batch of 382 units, these bottom discharge hopper waggons are operated in 'married' pairs.
190109 16368 viewsBinduli, Mineral Resources Ltd empty iron ore train 4030 with MRL's MHPY type iron ore waggon MHPY 00150 built by CSR Yangtze Co China serial 2014/382-150 in 2014 as a batch of 382 units, these bottom discharge hopper waggons are operated in 'married' pairs.
190109 16378 viewsBinduli, Mineral Resources Ltd empty iron ore train 4030 with MRL's MHPY type iron ore waggon MHPY 00365 built by CSR Yangtze Co China serial 2014/382-365 in 2014 as a batch of 382 units, these bottom discharge hopper waggons are operated in 'married' pairs.
190109 16388 viewsBinduli, Mineral Resources Ltd empty iron ore train 4030 with MRL's MHPY type iron ore waggon MHPY 00366 built by CSR Yangtze Co China serial 2014/382-366 in 2014 as a batch of 382 units, these bottom discharge hopper waggons are operated in 'married' pairs.
190109 16398 viewsBinduli, Mineral Resources Ltd empty iron ore train 4030 with MRL's MHPY type iron ore waggon MHPY 00231 built by CSR Yangtze Co China serial 2014/382-231 in 2014 as a batch of 382 units, these bottom discharge hopper waggons are operated in 'married' pairs.
190109 16408 viewsBinduli, Mineral Resources Ltd empty iron ore train 4030 with MRL's MHPY type iron ore waggon MHPY 00232 built by CSR Yangtze Co China serial 2014/382-232 in 2014 as a batch of 382 units, these bottom discharge hopper waggons are operated in 'married' pairs.
190109 16418 viewsBinduli, Mineral Resources Ltd empty iron ore train 4030 with MRL's MHPY type iron ore waggon MHPY 00335 built by CSR Yangtze Co China serial 2014/382-335 in 2014 as a batch of 382 units, these bottom discharge hopper waggons are operated in 'married' pairs.
190109 16429 viewsBinduli, Mineral Resources Ltd empty iron ore train 4030 with MRL's MHPY type iron ore waggon MHPY 00336 built by CSR Yangtze Co China serial 2014/382-336 in 2014 as a batch of 382 units, these bottom discharge hopper waggons are operated in 'married' pairs.
190109 16437 viewsBinduli, Mineral Resources Ltd empty iron ore train 4030 with MRL's MHPY type iron ore waggon MHPY 00253 built by CSR Yangtze Co China serial 2014/382-253 in 2014 as a batch of 382 units, these bottom discharge hopper waggons are operated in 'married' pairs.
190109 16448 viewsBinduli, Mineral Resources Ltd empty iron ore train 4030 with MRL's MHPY type iron ore waggon MHPY 00254 built by CSR Yangtze Co China serial 2014/382-254 in 2014 as a batch of 382 units, these bottom discharge hopper waggons are operated in 'married' pairs.
190109 16458 viewsBinduli, Mineral Resources Ltd empty iron ore train 4030 with MRL's MHPY type iron ore waggon MHPY 00075 built by CSR Yangtze Co China serial 2014/382-75 in 2014 as a batch of 382 units, these bottom discharge hopper waggons are operated in 'married' pairs.
190109 16468 viewsBinduli, Mineral Resources Ltd empty iron ore train 4030 with MRL's MHPY type iron ore waggon MHPY 00076 built by CSR Yangtze Co China serial 2014/382-76 in 2014 as a batch of 382 units, these bottom discharge hopper waggons are operated in 'married' pairs.
190109 16477 viewsBinduli, Mineral Resources Ltd empty iron ore train 4030 with MRL's MHPY type iron ore waggon MHPY 00317 built by CSR Yangtze Co China serial 2014/382-317 in 2014 as a batch of 382 units, these bottom discharge hopper waggons are operated in 'married' pairs.
190109 16488 viewsBinduli, Mineral Resources Ltd empty iron ore train 4030 with MRL's MHPY type iron ore waggon MHPY 00318 built by CSR Yangtze Co China serial 2014/382-318 in 2014 as a batch of 382 units, these bottom discharge hopper waggons are operated in 'married' pairs.
190109 16498 viewsBinduli, Mineral Resources Ltd empty iron ore train 4030 with MRL's MHPY type iron ore waggon MHPY 00016 built by CSR Yangtze Co China serial 2014/382-16 in 2014 as a batch of 382 units, these bottom discharge hopper waggons are operated in 'married' pairs.
190109 16508 viewsBinduli, Mineral Resources Ltd empty iron ore train 4030 with MRL's MHPY type iron ore waggon MHPY 00015 built by CSR Yangtze Co China serial 2014/382-15 in 2014 as a batch of 382 units, these bottom discharge hopper waggons are operated in 'married' pairs.
190109 16518 viewsBinduli, Mineral Resources Ltd empty iron ore train 4030 with MRL's MHPY type iron ore waggon MHPY 00003 built by CSR Yangtze Co China serial 2014/382-3 in 2014 as a batch of 382 units, these bottom discharge hopper waggons are operated in 'married' pairs.
190109 16528 viewsBinduli, Mineral Resources Ltd empty iron ore train 4030 with MRL's MHPY type iron ore waggon MHPY 00004 built by CSR Yangtze Co China serial 2014/382-4 in 2014 as a batch of 382 units, these bottom discharge hopper waggons are operated in 'married' pairs.
190109 16538 viewsBinduli, Mineral Resources Ltd empty iron ore train 4030 with MRL's MHPY type iron ore waggon MHPY 00035 built by CSR Yangtze Co China serial 2014/382-35 in 2014 as a batch of 382 units, these bottom discharge hopper waggons are operated in 'married' pairs.
190109 16548 viewsBinduli, Mineral Resources Ltd empty iron ore train 4030 with MRL's MHPY type iron ore waggon MHPY 00036 built by CSR Yangtze Co China serial 2014/382-36 in 2014 as a batch of 382 units, these bottom discharge hopper waggons are operated in 'married' pairs.